Blockchain समाचार 08.08.2018 - Blockchain समाचार
अगस्ट 8, 2018 व्यवस्थापक
बिजुली नेटवर्क गर्न विस्तार 3000 नोड्स, क्षमता नजिकिंदै 100 BTC
बिजुली नेटवर्क यसको तीव्र विस्तार जारी यसलाई बित्दै रूपमा 3000 को mainnet नेटवर्कमा नोड्स. अनुगमन स्रोत 1ml.com डेटा चट्याङ्ग सञ्जालको क्षमता बढेको छ भनेर पुष्टि गर्छ 85% विगतमा 30 दिन, गर्न mainnet चट्याङ्ग गरेको कुल रकम ल्याउन 97 BTC ($628,000).
बिजुली मूल को सुरु वरिपरि शुरू भयो बेहतरीन थियो 2018 यसको mainnet फारममा, Q2 मार्फत बढाने वृद्धि संग. मे महिनामा 2018, क्षमता बस मा अपेक्षाकृत कम रहेका थिए 18 BTC, एक नाटकीय वृद्धि जुलाईमा थाल्नुअघि 2018.
येल अर्थशास्त्री द्वारा अध्ययन भन्छ सबै विभागहरू Bitcoin पकड गर्नुपर्छ
प्रोफेसर Aleh Tsyvinski अनुसार, Bitcoin एक पोर्टफोलियो अभिन्न भाग हुनुपर्छ, कसैले cryptocurrency वा बारेमा उत्साहित छ कि छैन भनेर बिना. कसैको पोर्टफोलियो को सर्वोत्कृष्ट निर्माण लागि, को अर्थशास्त्री Bitcoin कम्तिमा लागि खाता गर्नुपर्छ भन्छन् 6%. संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय cryptocurrency बारेमा कम उत्साही भएकाहरूलाई, पकड गर्नुपर्छ 4%. यस विषयमा कसैको स्थिति बिना, Bitcoin को एक न्यूनतम शामिल गर्नुपर्छ 1% एक पोर्टफोलियो को, विविधीकरण उद्देश्यका लागि.
शीर्षक अध्ययन, जोखिम र Cryptocurrencies को लाभ, पनि cryptocurrencies एक विशिष्ट सकारात्मक सुविधा दिइएको गर्दा परम्परागत स्टक र बन्धन तुलना. शार्प गरेको अनुपात प्रयोग, Tsyvinski डिजिटल मुद्राहरू फिर्ती लागि उच्च क्षमता देखाउँछ कि प्रदर्शन, आफ्नो वृद्धि volatility बावजुद. पनि, अध्ययन गति र निवेशक ध्यान मूल्य प्रमुख चालक कि अन्तमा.
लागि क्राकेन दैनिक बजार रिपोर्ट 07.08.2018
$117एम आज सबै बजार मार्फत कारोबार
हे Altcoin दैनिक टोली! Today...
अध्ययन प्रकट 27% of UK male m...
मा 2018, the ICO managed to ra...
"व्यापक पुन: प्राप्त गर्न Bitcoin,...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 07.08.2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 09.08.2018